Dagaalka Suuriya: Inta ay xabbad joojinta socoto fallaagadu 'waa ay is aruursanayaan' - Putin - BBC Somali
Dagaalka Suuriya: Inta ay xabbad joojinta socoto fallaagadu 'waa ay is aruursanayaan' - Putin
Image caption Ruushka oo Mareykanka ku eedeeyay inuu ka cagajiidayo kala sooca fallaagada Suuriya
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in kooxaha fallaagada Suuriya ay si khaldan u isticmaalayaan xabbad joojinta haatan ka jirta dalka oo ay dib isugu abaabulayaan.
Waxa uu sheegay in Mareykanka, oo taageero kooxo ka mid ah fallaagada, uu aad diiradda u saarayo sidii ay ku sii xagsan lahaayeen awoodooda milateri intii uu u kala saari lahaa qunyar socod iyo xagjir, taasi oo aheyd ujeedka xabbad joojinta dhaqangashay maalintii Isniinta.
Putin ayaa sidoo kale ugu baaqay Washington in heshiiska xabbad joojinta la shaaciyo.
Waxaa jira xiisado sii kordhaya oo u dhaxeeya quwadaha waa weyn oo ku aaddan dowrka fallaagada iyo dib u dhaca ku yimid gargaarkii la gaarsiin lahaa dadka ku nool deegaanada go'doonka ku jira.
Waxaa soo ifbaxay muuqaal muujinaya kooxda Free Syrian Army oo eryaysa ciidammada gaarka ee Mareykanka ee ku sugnaa magaalada Raaci ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ugu yeeraya "kufaar".
Wasaaradda Gaashaandhiga Mareykanka, ee Pentagon-ka, ayaa Jimcihii sheegtay in tobannaan ka tirsan ciidammada Mareykanka la geeyay xudduuda Turkiga kuwaasi oo uu Turkigu codsaday, si ay ula dagaalamaan maleeshiyaadka la baxay Dowladda Islaamiga ah.
Image caption Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin